यस्तो छ सिके राउतको नालीबेली, वैज्ञानिकदेखि विखण्डनकारीसम्म « LiveMandu
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:४९
अमेरिकामा आधारित सिके राउत एउटा कमप्यूटर साइन्टीस्ट हुन् । क्याम्ब्रीज विश्वविधालयबाट यिनले पिएचडी गरेका छन् । आउनुहोस आज यिनको जीवनको कुरा गरौं, सदासर्वदा स्वतन्त्र मधेशको विषयमा विवादित यि नेताको जीवनका केहि पक्षहरु केलाउन जाँदैछौं ।
सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाँउमा यिनको जन्म भएको हो । काटी भन्ने ठाँउ नजिकैको बिधालयमा अध्यन गरेका यि सप्तरि जिल्लाका चन्द्रकान्त राउतले बेलायतको क्याम्ब्रीज विश्वविधालय र जापानको टोकियो विश्वविधालयमा अध्यन गरेका हुन् । उन्ले अमेरिकाको रेथन बीबीएन टेक्नोलोजी कम्पनीमा ठूलै पद सम्म पुगेर जागीर पनि खाएका हुन् ।
सर्वप्रथम राउतले गैर आवासि मधेशी संगठन खोलेर त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष भएर बसे । मधेशमा वसोवास गर्ने गैरआवासिय नेपालीहरुको यो ठूलो र पुरानो संगठन मानिन्छ । त्यपश्चात सामाजिक अभियन्ताका रुपमा इन्जोत फाउण्डेशन स्थापना गरि नेपाल, इथोपिया र बगंलादेश जस्ता देशमा सामाजिक सेवाको शुरुवाती कामहरु गर्न पनि यिनको योगदान रहेको बताइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सिके राउत नेकपामा प्रवेश गर्लान त ?
सर्वप्रथम सन् २०१४ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकारले प्रथमपटक यिनलाई सन्थाल समुदायमा देशविरोधी नारा र पृथकतावादी भाषण दिएकाले पक्राउ गरेको हो । सेप्टेम्बर २० मा यिनले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सरकार विरुद्ध कारावासमै आमरण अनसन शुरु गरेका थिए र सेप्टेम्बर २५ मा यिनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : डेन्जर जोनमा नेपाल
उतिबेला सञ्चार मन्त्री म्रीनेन्द्र रिजाल, नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल र तत्कालिन कृषी मन्त्री हरि पराजुली यिनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए । उतिबेला अमेरिकामा आधारित मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट वाच, एसियन ह्यूमन राइट कमिसन र एमएनएस्टी इन्टरनेशनलले राउतको रिहाईका लागी पैरवी र वक्तव्य समेत जारी गरेका थिए । फेरि जनवरी ३ २०१५ मा राउतलाई जुतुवा भन्ने ठाँउबाट व्यापक प्रहरी परिचालन गरि पक्राउ गरियो, उतीवेला धेरै यिनका सर्मथकहरु हताहत भएको र चोटपटक लागेको पनि बताइन्छ । राउतले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनकथामा आधारित डिनायल टु डिफेन्स नामक पुस्तक लेखेका छन् भनें द ब्ल्याक बुद्ध नामक वृतचित्र पनि निर्माण गरेका छन् । सन् २०११ मा यिनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्केको तथ्य देखिन्छ ।
राउत एउटा बुद्धिजीवी र प्रवुद्ध व्यक्तित्वका साथ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चा र ख्यातीमा रहेको व्यक्तित्व भएको प्रष्ट हुन्छ तथापी नेपाल आमा र शाषन व्यबस्थाका कुराहरु र अभिव्यक्तिका कारणले राउतको ज्ञान भन्दा दुर्गुण धेरै देखिएको पाइन्छ ।
मधेश बिखण्डनका कुरा र स्वतन्त्र मधेशका कुराहरु के अब सरकारले जनमन संग्रहवाट तय गर्ने हो त ? सिके राउत र सरकार बिचको यो रातारातको सहमती र गठबन्धनले आखिर के देखिन्छ त ?
सिके राउत मूलधारको राजनितिमा आएपनि यिनका पछिल्ला भनाई र बक्तव्यहरु इन्टरनेटमा छताछुल्ल देखिन्छ, सरकारसंगको संझौतापछि त यि इन्टरनेटका बक्तव्य र पहिचानलाई मेटाउन पर्ने हैन र ? सिके राउत आजको नेपाली परिवेशमा एउटा रहस्य हो या उदारता, हेर्न बाँकी छ ।
#सि के राउत